एन्ड्रोइड | गीतहरू काट्न र संगीत सम्पादन गर्न उत्तम अनुप्रयोगहरू Androidsis
संगीत र अडियो सम्पादनको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, समीक्षा
आज हामी तपाईलाई लिएर आउछौं ध्वनि सम्पादन सम्बन्धित उत्तम प्ले स्टोर अनुप्रयोगहरू। यदि तपाईंसँग डीजे आत्मा छ भने, तपाईंलाई यो मनपर्दछ उच्च गुणवत्ताको संगीत डाउनलोड गर्नुहोस्, तपाईं गीतहरू काट्न चाहानुहुन्छ, वा तपाईं आफैं रेकर्ड गर्न मन पराउनुहुन्छ हामी तपाईंलाई केहि अनुप्रयोगहरू देखाउँछौं जुन तपाईंलाई मनपर्न सक्छ। ध्वनि सम्पादन सम्बन्धी सम्बद्धताको धेरै संख्या छन्। र हामी तपाईंलाई ती चीजहरू देखाउँदैछौं जुन हामी सबैभन्दा उपयोगी र चाखलाग्दो फेला पार्दछौं।
के तपाईंलाई यस्तो भएको छ कि तपाईंको गीतको तपाईंको मनपर्ने अंश लगभग अन्तमा छ?। जब हामी रि ringटोनको रूपमा गीत प्रयोग गर्छौं, जुन भाग हामी धेरैलाई मनपर्दछौं सधैं आवाज गर्दैन। आज हामी तपाइँको गीतको एक अंश काट्न अनुप्रयोगहरूलाई सिफारिस गर्न जाँदैछौं जुन तपाइँ तपाइँको स्मार्टफोनमा रिंगटोनको रूपमा आवाज दिन चाहानुहुन्छ।
1 के तपाईलाई डीजे जस्तो लाग्छ? के तपाईं आफ्नै सत्रहरू गर्न चाहनुहुन्छ?
2 ध्वनि सम्पादन अनुप्रयोगहरू र कटिंग गीतहरू जुन हामीलाई सब भन्दा मनपर्दछ
2.1 एमपी3कटर र रिंगटोन निर्माता
2.2 अडियो रेकर्डर र सम्पादक
2.3 संगीत निर्माता जाम
2.4 डीजे २
3 गीतहरू काट्न यी अनुप्रयोगहरूको तपाईं के सोच्नुहुन्छ?
के तपाईलाई डीजे जस्तो लाग्छ? के तपाईं आफ्नै सत्रहरू गर्न चाहनुहुन्छ?
त्यहाँ रिंगटोनको रूपमा संगीत विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्नको लागि डिजाइन गरिएका धेरै अनुप्रयोगहरू छन्. यी केसहरूमा सम्पादन धेरै सरल छ। हामीले प्ले गर्नको लागि मात्र गीतको एक भाग छान्नुपर्दछ। केहि सही उपकरणका साथ गीतहरू कटाउन सजिलो र चाँडो हुनेछ।
तर यदि तपाइँको आकांक्षा संगीत सम्पादन को साथ उच्च हो, चिन्ता नलिनुहोस्। हाम्रो स्मार्टफोनले हामीलाई उच्च स्तरमा संगीत सम्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँको लागि संगीत सम्पादन मात्र काट्ने र टाँस्ने भन्दा बढि छ भने, हामी तपाइँलाई तपाइँको चासोको अनुप्रयोगहरू पनि देखाउनेछौं। र निस्सन्देह, हामी कलात्मक भावना भएका मानिसहरूलाई पनि मद्दत गर्नेछौं जसले आफूलाई गुणस्तरीयताको साथ विश्वमा चिनाउन चाहन्छन्।
ध्वनि सम्पादन अनुप्रयोगहरू र कटिंग गीतहरू जुन हामीलाई सब भन्दा मनपर्दछ
एमपी3कटर र रिंगटोन निर्माता
यस प्रकारको अनुप्रयोग सामान्यतया धेरै सफल हुन्छ गुगल अनुप्रयोग स्टोरमा। हाम्रो मोबाइल फोन निजीकृत गर्न को लागी हाम्रो उत्सुकतामा हामी हाम्रो रिंगटोनमा व्यक्तिगत स्पर्श पनि थप्न चाहान्छौं। र जब हामी कुनै अनुप्रयोग खोज्न जान्छौं जुन यस कार्यलाई हाम्रो मनपर्ने कार्य गर्दछ, यो छनौट गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यहाँ धेरै फरक-फरक विकल्पहरू र विचारहरू छन् जुन कहिलेकाँही उपयुक्त अनुप्रयोग छनौट गर्न धेरै समय लिन्छ संगीत सम्पादन गर्न भन्दा हामी के चाहन्छौं। त्यसकारण हामी यो अनुप्रयोगको प्रस्ताव लिएर ती खोजी मिनेटहरू सरल बनाउन चाहन्छौं। किन? एमपी cut काटर र रिंगटोन मेकरले जुन उद्देश्यका लागि हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा डाउनलोड गर्यौं पूरा गर्दछ।
तपाई चाहानुहुन्छ तपाईं आफ्नो गीत को सबै भन्दा मनपर्ने भाग चयन गर्नुहोस् मनपर्ने? यस अनुप्रयोगको साथ तपाईं यसलाई केहि सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको मनपर्ने विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस् र तपाईंलाई मनपर्ने अंश काट्नुहोस्। तपाई यसलाई रिंगटोनको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं राम्रो मुडमा उठ्नको लागि अलार्म पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, वा एक विशिष्ट सूचना टोन जुन तपाईं सधैं ध्यान दिनुहुन्छ।
यो अनुप्रयोग अडियो ढाँचाहरूको विशाल बहुमत समर्थन गर्दछ त्यसोभए तपाईको स्मार्टफोनबाट गीत चयन गर्न तपाईलाई समस्या हुने छैन। हामीले किन यो अनुप्रयोग छनौट गर्यौं र अरूलाई हैन? राम्रो, धेरै सजिलो। यो अनुप्रयोगले मात्र हामीलाई चाहिएको कार्य गर्न चाहान्छ। सुरू र अन्त जनाउने अडियो ट्र्याक काट्नुहोस्। र एकचोटि फ्रग्मेन्ट चयन भएपछि यसलाई हामीले चाहेको जस्तो सेभ गर्नुहोस्।
एक सरल र प्रभावी अनुप्रयोग जसले तपाईंलाई गीतहरू काट्न मद्दत गर्दछ। यस अनुप्रयोगका निर्माताहरूले विशेष रूपमा एउटा कार्यमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् र यो कहिलेकाँही सराहना पनि गरिन्छ। स्पष्ट र सहज ईन्टरफेस। कुनै जटिलताहरू वा विकल्पहरूको भीड छैन। पोइन्टमा, तपाइँको मनपर्ने विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस् र यसलाई तपाइँको मनपर्नेमा रिंगटोन वा सूचनाको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
MP3 कटर र रिंगटोन निर्माता
विकासकर्ता: परमाणु जानकारी
अडियो रेकर्डर र सम्पादक
यस अनुप्रयोगको साथ हामी अलि अलि अगाडि जान्छौं। अधिक संगीत प्रकाशन को व्यावसायिकता तिर। यो एक धेरै पूर्ण अनुप्रयोग हो जसले हामीलाई सम्भावनाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। यो धेरै चीजहरूको लागि बाहिर खडा हुन्छ र सबै सबै सकारात्मक। एन्ड्रोइडमा केहि अनुप्रयोगहरू छन् जुन मिक्सन, काट्ने र मिक्स गर्ने अनुमति दिन्छ।
अघिल्लो अनुप्रयोगको बिपरित, जुन हामीले सिफारिस गर्छौं यदि तपाईं केवल एक हिस्सा चयन गर्न चाहानुहुन्छ। अडियो रेकर्डर र सम्पादकको साथ तपाईंसँग धेरै संभावनाहरू छन्। हामी अडियो फाईलहरूलाई विभिन्न ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्छौं। मिश्रण एकै समयमा दुई अडियोहरू। पनि भोल्युम समायोजित गर्नुहोस् ती गीतहरू जुन अरूसँग मिल्दैन। हामीसँग पनि छ गति र कुञ्जी समायोजनहरू.
यो अनुप्रयोग यसले व्यावहारिक रूपमा हाल प्रयोग गरिएका सबै ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ। Wav, pcm, wave, aac, m4a, र अधिक धेरै। प्लस पनि तपाईं यसलाई अडियो रेकर्डरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। फाईलहरू जुन तपाईले पछि मनपर्नेमा सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि।
यसका सिर्जनाकर्ताहरू दावी गर्छन् कि त्यो हो एक मात्र एन्ड्रोइड रेकर्डर जसले तपाईंलाई रेकर्ड गर्दा रिवाइन्ड गर्न अनुमति दिन्छ। हामी हाम्रो आवाज थप्न सक्छौं अडियो ट्र्याकमा। तिनीहरूलाई मिक्स गर्नुहोस् हाम्रो धुनमा, पनि इको वा बिभिन्न ध्वनि प्रभावहरू थप्नुहोस्।
र को रूपमा, यस अनुप्रयोगको माध्यमबाट जाने सबै चीजहरू रेकर्ड गर्न सकिन्छ र तुरून्त साझेदारी गर्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै संभावनाहरू छन् जुन अडियो रेकर्डर र सम्पादकले प्रस्ताव गर्दछ। दुबै पेशागत र मनोरन्जन क्षेत्रहरूका लागि उपयोगी। मूल मिक्सहरू बनाएर आफ्नै सत्रहरू सिर्जना गर्नुहोस्। वा तत्काल रेकर्ड गर्नुहोस् जुन तपाईं भुल्न सक्नुहुन्न।
सानो स्न्याग प्राय: जसो यो स्तरको अनुप्रयोगहरूको बारेमा हुन्छ, कहिलेकाँही हामीले कुनै प्रकारको समायोजन छुटाउन सक्छौं। जुन हामी समाधान गर्न सक्छौं, हो, बक्सको माध्यमबाट। हामीसँग हामीसँग सुधार गरिएको र अधिक पूर्ण संस्करण छ, तर शुल्कको लागि। तपाई कति टाढा जान चाहानुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्।
संगीत निर्माता जाम
यो अनुप्रयोगको साथ हामी प्रस्ताव गर्दछौं कि तपाईं आफ्नो सिर्जनात्मकता हटाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं भित्र एक संगीतकार छ भने, संगीत निर्माता जाम तपाईंलाई त्यहाँ बाहिर मद्दत गर्दछ। धेरै सरल तरिकामा तपाईं कुनै समय मा मूल संगीत रचना हुनेछ। तपाईंको संगीत शैली छनौट गर्नुहोस्, र अगाडि बढ्नुहोस्, सम्भावनाहरू ठूलो छन्। तपाइँको औँलाहरूमा 100 भन्दा बढी शैलीको संगीत, तपाइँको के हो ?.
रक, हिप हप, टेक्नो, संगीत निर्माता जाममा सबै प्रकारका संगीतकारहरूको लागि ठाउँ छ। हामीसँग रेकर्डि stud स्टुडियोको शुद्धतम शैलीमा मिक्सर हुनेछ। एक आठ-च्यानल मिक्सर जुन तपाइँको आफ्नै शैलीको साथ संगीत सिर्जना गर्न। तपाईं बिभिन्न आवाज समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, र समायोजन सुपर सजिलो बनाउनुहोस्।
धेरै पटक यस प्रकारको एप्लिकेसनले ती व्यक्तिहरूलाई डराउँछ जुन अडियो सम्पादनमा ज्ञान हुँदैन। तर यदि यो अनुप्रयोगले केहि गर्व गर्दछ, यो यसको साधारण ह्यान्डलिंग हो। तपाईंले पहिले केहि जान्नु आवश्यक पर्दैन, तपाइँ यसको प्रयोगको रूपमा तपाइँ सिक्नुहुनेछ। र तपाईं संगीतकारहरूको विश्वव्यापी समुदायसँग तपाईंको सिर्जनाहरू साझा गर्न सक्नुहुनेछ.
को क्याटलग प्रभाव र छोराहरू त्यो संगीत निर्माता जाम प्रदान गर्दछ एक पेशेवर स्तर मा छ। यो पनि छ साप्ताहिक अपडेटहरू यसले तपाईंलाई भर्खरको मजा लिनेछ। त्यसैले यो अनुप्रयोग शैली बाहिर कहिल्यै जानेछैन, र न त तपाईंको संगीत। टेम्पो, ध्वनि प्रभावहरू छान्नुहोस् र तपाईंको स्मार्टपोनको साथ वास्तवमा अविश्वसनीय सिर्जनाहरूको आनन्द लिनुहोस्.
यस अनुप्रयोगले प्रस्ताव गरेको नतीजा साँच्चिकै आश्चर्यजनक छ। अनुप्रयोग आफैंले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ कि तपाईंले मिलाउनुभएको समायोजन ताल, भोल्युम र टेम्पोमा समन्वय गरिएको छ। संगीत निर्माता जाम हो तपाईंको पोर्टेबल रेकर्डिंग स्टूडियो। तपाईंको संगीत, तपाईंको शैली, र तपाईंको स्मार्टफोन। स्टारडममा आफैलाई सुरूवात गर्न तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? यस अनुप्रयोगको साथ तपाईं प्रत्येक पटक तपाईंको दर्शकको नजिक हुनुहुनेछ।
संगीत निर्माता जाम: बीटमेकर एप
विकासकर्ता: ठूलो स्वरले
अन्तमा, र यसैले हामीसँग थोरै थोक भएको छ, dj खेल्नको लागि एउटा अनुप्रयोग हाम्रो स्मार्टफोनको साथ। अघिल्लो सबैसँग जस्तै, हामीसँग प्ले स्टोरमा विशाल विविधता छ। र हामी तपाईसँग यस बारे धेरै कुराका लागि कुरा गर्न चाहन्छौं।
एउटा मुख्य सीमाहरू जुन हामी हाम्रो स्मार्टफोनसँग डीजे गर्न चाहन्छौं भने फेला पार्न सक्दछौं उपलब्ध गीतहरूको सूची। सामान्य नियमको रूपमा, हामीले डाउनलोड गरेको संगीतको लागि समाधान गर्नुपर्नेछ। र निस्सन्देह, यो सबै साथीहरूको मनपर्दो हिट गर्न धेरै गाह्रो छ।
Djay2 संग त्यो समस्या इतिहासमा तल झर्नेछ। यस अनुप्रयोगका लागि सबभन्दा सफल सुविधाहरू मध्ये यो एक सजीलो हो स्पोटिफाइको साथ समिकरण। केहि तपाइँको गीत सूची असीमित बनाउन हुनेछ। यस अनुप्रयोगमा स्पोटिफाइको एकीकरणले सामग्रीको मामलामा यसलाई Play Store को सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउँछ।
Djay2एक अनुप्रयोग हो जुन एक पेशेवर DJ मिक्सरको नजिक छ। शक्ति बाहेक ब्लुटुथ मार्फत उपकरणहरू जडान र सिnc्क गर्नुहोस् एकै साथ। धेरै MIDI समर्थन एक वास्तविक डीजे नियन्त्रणकको साथ कुराकानी गर्न छ.
पनि प्रयोगकर्ताहरू द्वारा हाइलाइट गरिएको छ स्क्रीन उपस्थिति को अनुकूलन को उच्च स्तर। र li र आकार को संयोजन को रूप मा हमारी पसंद को लागी सक्षम हुनु को लागी। Djay2 ले हामीलाई हाम्रो संगीत प्रत्यक्ष रूपमा प्ले गर्ने सम्भावना दिन्छ, अर्को गीतको एक पूर्वावलोकन बनाएर तिनीहरूलाई उत्तम तरिकामा लिंक गर्न। तर यसले हामीलाई रेकर्डि .हरू पनि गर्न अनुमति दिन्छ हाम्रो सत्र को साथीहरु संग वा सामाजिक नेटवर्क मा साझा गर्न को लागी।
संक्षेप मा, djay2 एक आदर्श उपकरण हो तपाईंको पार्टीहरु को मालिक बन्न। Spotify का साथ लिंक गर्न सक्षम हुन ईन्टरनेट जडान भएको तपाईंको DJ सत्रहरूको सीमा छैन। यदि तपाइँ आफूलाई डीजेइ professionको लागि व्यावसायिक रूपमा समर्पित गर्नुहुन्छ भने, यो अनुप्रयोग एक आदर्श उपकरण हो जुन तपाइँको स्मार्टफोनसँग तपाइँको सत्रहरू सम्पन्न गर्ने हो। तर यदि तपाईं केवल एक एमेच्योर डीजे हुनुहुन्छ भने तपाईं "डेकमा" भएको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको संगीत शैली जटिल बिना नै विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल्य: € 2.99
गीतहरू काट्न यी अनुप्रयोगहरूको तपाईं के सोच्नुहुन्छ?
हामीसँग संगीत र अडियो सम्पादनको क्षेत्रमा केही कुरा छ। यी अनुप्रयोगहरूको साथ तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन मा राख्न सक्नुहुन्छ रिंगटोनको रूपमा तपाइँको मनपर्ने गीत। तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने अंश काट्ने र अलार्म वा सूचनाहरूको लागि प्रयोग गरेर। धेरै तपाईं रेकर्ड गर्न र सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ अडियो र संगीत इच्छा मा.
र पक्कै पनि तपाईं संसार भित्रका कलाकारहरू भित्र देखाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछौं तपाईंको आफ्नै संगीत सिर्जना गर्ने सब भन्दा सजिलो तरीका। वा बाट यस पलको सर्वश्रेष्ठ शीर्षकहरूको साथ तपाईंको निजीकृत सत्रहरू बनाउनुहोस्। संक्षिप्तमा, यी प्रस्तावित अनुप्रयोगहरूको साथ अडियो र संगीत सम्पादन को संसार तपाईंको औंलाको छ।
सधैं जस्तो, हामी तपाईंलाई अनुप्रयोगलाई समावेश गर्नको लागि आमन्त्रित गर्दछौं जुन तपाईंलाई सबैभन्दा प्रासंगिक देखिन्छ। वा कि तपाइँ यी अनुप्रयोगहरु को साथ आफ्नो अनुभव मा टिप्पणी। वा अरूसँग जुन तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले यो चयन मनपर्‍यो र यी अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई तपाईंको संगीत रचनात्मकता मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » संगीत र अडियो सम्पादनको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू
स्नैपच्याट स्पेक्ट्सेकलहरू, लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कको पहिलो पहनने योग्य
नि: शुल्क निजीकृत क्रिस्मस अभिवादन भिडियो, सान्ता क्लाउजलाई आफूले मनपराएको व्यक्तिलाई बधाई दिनुहोस्